TALOOYIN IYO TABAHA LOOGU TALAGALAY SII KORDHAYA CAYAYAANKA SIDA GEEDKA MALAB - BEEKEEPING
Waxay u egtahay, waa maxay isticmaalka haramaha sunta ah, taas oo aan ku habbooneyn xitaa xayawaanka xayawaanka? Laakiin maya - dabiiciga ah, wax walbaa wuxuu leeyahay codsigiisa. Iyo bruise caadi ah, taas oo ah mid aad u jecel beekeepers, mar kale xaqiijin this.
Dhirta labadlaha ah ee aan qabyada lahayn ayaa laga arki karaa labada lugood iyo dhinaca dhinaca wadada, labadaba dhiiqada dhagxaanta iyo meel u dhow dhismaha. Waxay ku koraan ilaa 1.8 m dhererka iyo waxaa lagu daboolaa burooyinka lafdhabarta ah. Warshadu waa sunta dadka iyo xayawaanka badankood, markaa waa inaad taxadar u yeelataa. Peduncles waxay leeyihiin qaab aad u dheer, sida baalalka, oo lagu daboolay ubaxyo, oo lagu soo ururiyey curl. Mid ka mid ah peduncle wuxuu noqon karaa ilaa 4 kun oo ubax ah foomamka qaab-dawan-qaabeeya, laakiin waxay isla markiiba bloom, laakiin 1-2 maalintii. Ka dib furitaanka ubaxa, ubaxa wuxuu leeyahay midab khafiif ah oo casaan ah, iyo ka dib markii pollen by shinni, ka dib 1-2 maalmood waxay noqotaa buluug iyo horeba iyada oo aan nectar.
Ma taqaanaa? Muraayadda finanku sidoo kale waa mid buluug ah, waana tan si cad u muuqata rugta.
Warshad caleemo qoyan oo bilawga Luulyo iyo Agoosto, laga bilaabo sanadka labaad ka dib beerashada. Sannad kowaad, wuxuu leeyahay rosette iyo xidid, taasoo hoos ugu dhacaysa ilaa 60 cm.
Marka la eego wax soo saarkeeda, nabarka ayaa ka hooseeya liniinka, iyo farqigan waa qiyaas ahaan 200 kg hektar. Shinni ka soo jeeda ubax hal keli ah waxay qaadan kartaa ilaa 2.5 mg oo ah nectar, sii deynta taas oo dhirta aysan ku xirnayn abaar ama qabow. Iyadoo ay ugu wacan tahay midab buluug ah oo casaan ah ee ubaxyada, polls si dhakhso ah u hesho. Mid ka mid ah xayawaanka shinni ah hektar kasta oo hektar ah ee dhirta malabkani waxay qaadan kartaa ilaa 800 kg halkii hektar, taas oo ah 3-4 jeer ka badan geedo kale. Waxaa lagu talinayaa in 4-5 qoys oo hektar ah lagu hayo.
Tilmaamaha sii kordhaya ee cayayaanka caadiga ah
Inkasta oo dhirta ay tahay mid aan qabyo ahayn, si ay si wax ku ool ah u kobciso cayayaanka sida dhirta malab, waxaad u baahan tahay inaad barato tiknoolojiyada beeraha, ka dibna waxaad siin kartaa shinni shaqo leh xilliga oo dhan.
Waa muhiim! Nabaradu waxay leeyihiin lafdhabar xoog leh waxayna uga mahadcelineysaa si dhib yar oo u adkeysata abaarta. Laakiin qoyaan aad u badan isaga waa xun yahay.
Meelaha ay jiraan barafka barafka yar, barar ayaa lagu beeray miro, kaas oo u adeega hoy si loogu keydiyo. Ka dib 2 bilood ka dib markii biqilka abuurka ah, miro lagu beeray on hay, ka tagaya xoqin ilaa 12 cm, kaas oo u adeegi doonaa hoy si ay u qabtaan barafka. Gobolladaas oo had iyo jeer ay jiraan baraf badan, ma aad beeran kartid. Wixii wax soo saarka ugu badan ee abuurka ee sanadka ugu horeeya, dhirta malab ee hal sano ah, sida phacelia, lagu beeray leh bruise. Si aad u hesho caleemaha horay iyo xooggan, warshadkan waxaa lagu beeray ka hor jiilaalka, ka hor bilawga ah ee dhaxan. Haddii cimilada gobolka ee aan degganeyn, waxaa ugu wanaagsan in la beero dabayaaqadii May - horraantii Luulyo, ka dibna dhirta malabku waxay yeelan doontaa waqti ay ku koraan oo ay helaan xoog ku qaboojin jiilaal ammaan ah.
Intaa waxaa dheer in dhirta dhirta caadiga ah, dhirta ay yihiin dhirta malab-tayo sare leh waxaa ka mid ah kuwan soo socda: Linden, cherry shimis, kariimka, tufaaxa, blueberry, currant madow, boom, ash buur, nacas caadi ah, sir, raspberry, pear.
Badanaa nabarka waxaa la beeray leh geedo malab ah dilka, taas oo dhexda dhexe ee xagaaga yihiin mown for hay. Ka dib markii in, nabarka ku siinayaa badan oo caws ubax, iyo shinni uruuriyaan nectar ilaa dhaxan. Dhirta malabkani waxay ku kori kartaa hal meel dhawr sano, maaddaama abuurku sii jiri karo muddo 3 sano ah.
Ma taqaanaa? Abuurka of this warshadda malab gaarka ah yihiin aad u yar oo waxaa jira ilaa 280 kun oo iyaga ka mid ah 1 kg.
Ciid kasta oo ku habboon beerto, ilaa iyo inta uu jiro qorrax ku filan. Sida caadiga ah, waxay ku beeri leh seeder gaar ah ama gacmahooda, iyo qoto dheer ee abuurka abuurka ah ee dhulka waa 1-3 cm Isticmaalka abuurka waa ilaa 5 kg hektar.
Daryeelka gaarka ah ee nabarka aan loo baahan yahay, sida dhirta this malab ka yimid duurjoogta, halkaas oo ay si buuxda u sameeyaan iyada oo aan ka hor tegin aadanaha. Dalaggiisa uma baahna waraabin ama jarjaran. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku beerato dhul wanaagsan oo la bacrimiyey, caws ubaxu wuxuu noqon doonaa mid ka sareeya oo ka xoog badan, ubax badan ayaa ku siin doona malab badan.
Bruise ma aha oo kaliya warshad malab oo qiimo leh, laakiin sidoo kale warshad caafimaad leh oo leh bakteeriyada, bakteeriyada, bogsashada dhaawaca, guryaha hantida. Ujeedooyinka daaweynta, ubaxa iyo caleemaha geedka, la ururiyey inta lagu guda jiro muddada ubax iyo si fiican u qalajiyey, ayaa ugu fiican.
Marka laga soo tago fitamiin C iyo saponin, sunta ayaa joogta alaabta ceeriin ee la goostay, gaar ahaan, loox, sidaas darteed daaweynta waa in la sameeyaa taxadar.
Waa muhiim! Consolidine waa sun ku ah dareen xoog leh oo laga helaa dhammaan qaybaha geedka.
Caawin wanaagsan ayaa ka soo baxaysa faleebo faleebo leh xanuunka, arthritis, laabotooyinka, murgacasho. Soo saarida iyo walxaha warshadaan waxay kor u qaadaan heerka unugyada dhiigga cad iyo lymphocytes ee dhiigga iyo hagaajinta suubbanaanta. Caleemaha ayaa bogsiinaya guryaha, iyo faleebo ee ubaxyada saaraa colic. Diyaargarasyo ​​taas oo geedo-geedkan uu joogo waxay leeyihiin saamayn deg deg ah, sidaa daraadeed, waxay si fiican u isticmaalaan suuxdinta. Iyada oo ay ku xiran tahay guryaha sareeya, bucshirta biyaha waxaa loo isticmaalaa boronkiitada iyo xitaa xiiqdheerta. Geedka waxaa kale oo uu leeyahay sifooyin sun ah oo sun ah oo waxtar u leh qaniinyada masaska.
Faa'iidooyinka dhaqamada kale
Marka la barbardhigo dhirta kale ee malab, barar ayaa leh dhowr faa'iido oo waaweyn:
hoos u dhaca dhismaha ciidda;
uma baahnid daryeel dheeraad ah;
wuxuu kobcin karaa hal meel dhowr sano;
wuxuu leeyahay mid ka mid ah heerka ugu sarreeya ee medoproduktivnosti;
Nectar ma qallajinayso qorraxda qorraxda oo aan la maydhin roob;
malabkeedu wuxuu leeyahay dhadhan wanaagsan iyo waqti dheer oo kaydinta.
Sidaa daraadeed, 1 hektar oo kaamil ah oo aan qabyo ahayn oo fudud ee dhirta agrotechnical waxay bedeli kartaa 3-4 hektar oo ah dhirta kale ee jilicsan, iyo haddii loo isticmaalo si sax ah, waxay sidoo kale ka faa'iideysan kartaa caafimaadka aadanaha.